PUOLO SEASIDE APARTMENT - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGestioni Cesaro
UGestioni Cesaro yi-Superhost
I-Puolo Seaside Apartment ikwilali yolwandle emnandi yasePuolo Bay. Ifumaneka kumgangatho wesibini wesakhiwo sanamhlanje esiselunxwemeni kwaye inokuhlala abantu aba-4.
Indlu, ehlaziywe ekuqaleni kwe-2016, inikezela: igumbi eliphambili elinendawo yekhitshi, itafile yokutyela kunye nesofa eguqulwa ibe yibhedi ekhululekile yabantu ababini, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukuhlala kwakho. Indlu yonke ixhotyiswe nge-air conditioning. Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji, isitovu kunye nesinki etofo-tofo.Ngaphezu koko, i-oveni ye-microwave kunye neketile ziyafumaneka kuwe kunye nayo yonke into oyifunayo xa ulungiselela isidlo sakusasa, sasemini okanye sangokuhlwa.
Indlu yahlaziywa ekuqaleni kwe-2016, inikezela: igumbi eliphambili elinendawo yekhitshi, itafile yokutyela kunye nesofa eguqulwa ibe yibhedi ekhululekile yabantu ababini, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela kunye nayo yonke into oyifunayo ukuhlala kwakho. Indlu yonke ine-air conditioning. Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji, isitovu, isinki yasekhitshini, ukongezelela apho uya kuba neoveni yemicrowave kunye neketile kunye nayo yonke into eyimfuneko ukulungiselela isidlo sakusasa, sasemini okanye sangokuhlwa.
4.66 · Izimvo eziyi-107
Le ndlu ibekwe kwindawo entle yePuolo bay, iimitha ezimbalwa ukusuka kolona lwandle luhle kule ndawo. Indawo apho ifulethi likhona yindawo yabahambi ngeenyawo, ayifikeleleki ngokuthe ngqo ngemoto kodwa ifikeleleka ngendlela encinci yabahambi ngeenyawo. Kumda wolwandle kukho iindawo zokutyela ezininzi kunye neebhari apho unokungcamla izinto ezikhethekileyo zaselunxwemeni.
Le ndlu ibekwe kwindawo entle yasePuolo bay, iimitha ezimbalwa ukusuka kolona lwandle luhle kakhulu kule ndawo. Indawo yokuhlala ayifikeleleki ngemoto, kuba ibekwe kwindawo yabahambi ngeenyawo efikelelekayo ngendlela encinci yokuhla. Kwi-promenade uya kufumana iindawo zokutyela ezininzi kunye nemivalo apho unokungcamla okukhethekileyo kunxweme lweSorrento.
Umbuki zindwendwe ngu- Gestioni Cesaro
Ndisesandleni sakho ngokupheleleyo. Ungaqhakamshelana nam nangaliphi na ixesha kwaye ndiza kukubonelela ngalo naluphi na uhlobo loncedo kunye nolwazi ukuze wenze ukuhlala kwakho kube kokhethekileyo kwaye ungalibaleki.
Ndisesandleni sakho. Ngalo naliphi na ixesha ungaqhakamshelana nam kwaye ndiza kubonelela ngalo naluphi na uhlobo loncedo kunye nolwazi ukuze ndenze ukuhlala kwakho kube kukhethekileyo kwaye ungalibaleki.
Ndisesandleni sakho ngokupheleleyo. Ungaqhakamshelana nam nangaliphi na ixesha kwaye ndiza kukubonelela ngalo naluphi na uhlobo loncedo kunye nolwazi ukuze wenze ukuhlala kwakho ku…